Nin In Ka Badan 100 Muuqaal Ka Duubay Dumar Ku Jira Qolka Baadka – Beegsonews-Wararka maanta
Home XOGAHA DUNIDA Nin In Ka Badan 100 Muuqaal Ka Duubay Dumar Ku Jira...
Nin ku sugan magaalada Dubai ee dalka Imaaraatka Carabta ayaa lagu soo eedeeyay in uu ku xad gudbay 5 dumar ah kadib markii uu muuqaallo ka duubay iyaga oo qaawan.
Ninkan oo ah shaqaale Eeshiyaan ah da’diisuna tahay 41 sano jir ayaa waxa uu kamarad yar oo wadata jaajarkeeda uu ku rakibay saqafka sare ee baadka lagu maydho oo ay isticmaaleen dumarkani.
Dhibbanaha koowaad ee uu ka duubay Kamarada, da’deena ay tahay 32 jir ahna xaas la qabo ayaa sheegtay in markii ay isu diyaarinaysay baadka ay u malaysay in waxa meesha sare ku rakiban ay tahay kamarad balse ay illawday in ay ogaysiiso haweenka kale.
Gabadhii labaad ee gashay baadkan lagu maydho ayaa aragtay Kamarada ku jirta qafiska sare ee duubaysa, waana ay kasoo saartay kadibna waxa ay tustay saaxiibadeed si ay u baadhaan waxa ku jira kamaradda.
Kamaradda oo wadatay Memory yar ayay ka saareen waxaana ay galiyeen Mobile kooda si ay u fiiriyaan muuqaallada ku jira kadibna waxa ay arkeen gabadh iska siibtay maryaha oo si caadi u isticmaalaysa baadka.
Ninkii kamaradda ku rakibay baadka oo aan ka fogayn goobta ayaa ogaaday in kamaraddii gabdhaha ay ka saareen goobta waxaana uu isku dayay in uu kasoo qaado inta aanay daawan muuqaallada ku jira laakiin way ka diideen.
Ninkii oo aad u naxsan ayaa waxa uu gabdhaha ka raalli galiyay dembiga uu ka galay una sheegay in aanu dib ugu noqon doonin, gabdhihii ayaa waxa ay isku raaceen in ay cafiyaan ninka maadaama oo uu ugu dhaartay in aanu haysanin muuqaallo kale.
Intaasi ka dib gabadhii labaad ayaa waxa ay Kombiitarkeeda galisay Memory-gii kamarada waxaana ay ku aragtay in ka badan 100 muuqaal iyo sawirro tiro beel ah oo kamaraddu ka duubtay iyada iyo gabdho kale oo qaawan dharkana iska siibay si caadi ahna u gudanaya xaajadooda.
Gabadhii ayaa aad uga cadhootay waxa ninkani ku sameeyay waxaana ay ugu dambayn go’aan ku gaadhay in cajaladdan ay u gudbiso ciidamada Booliska.
Booliska ayaa gacanta kusoo dhigay Ninkan si ay u baadhaan kiiska, waxaana uu qirtay in kamaradda isaga uu ku rakibay musqusha bishii 12aad ee sannadkii hore islamarkaana ay duubaysay rag iyo dumarba, waxaana uu intaas ku daray in muuqaallada uu tifatir ku samaynayay muddadaas kadibna inta uu jeclaado uu kala harayay.
Dacwadda ninkan ayaa waxa ay maxkamaddu dib ugu muddaysay 8-da bisha Oktoobar ee soo socata.
Beegsonews Muqdisho Desk
Previous articleOohintu Waxay Daawo U Tahay Caafimaadka Sanka & Indhaha
Next articleMadaxweynaha Puntland Oo Fariin U Diray Isimada Dhaqanka Gobolka Bari